Nagu saabsan - Shenzhen Huyssen Technology Co., Ltd.
Ela aasaasay sannadkii 2011, awoodda Huyssen waxaa ka go'an inay noqoto bixiyaha ugu fiican ee xallinta awoodda. Khadadkayaga wax-soo-saarka waxaa ka mid ah sahayda korontada ee AC-DC, Awoodda DC-ga ee awoodda sare leh, Adapter-ka korantada, xeedho degdeg ah, wadar ahaan 1000+ nooc.
Awoodda Huyssen waxay si buuxda u awood u leedahay bixinta sahayda korontada oo tayo sare leh, waxaa loo adeegsan karaa kumanaan codsiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qalabka elektaroonigga ah, wax-soo-saarka, mashiinnada, xakamaynta habka, otomaatiga warshadda, farsamaynta kiimikada, isgaarsiinta, hababka kormeerka, maqalka, cilmi-baarista sayniska, aerospace , Gawaarida EV, isku xirka, nalalka LED, iwm. Sahaydayada korontada ayaa leh isku halaynta isticmaalka muddada-dheer, shaqaynta.Inkasta oo kharashku yahay qayb muhiim ah, laakiin waa isku-halayn taas oo kala soocaysa wax-soo-saarka run ahaantii ka sarreeya.
Waqtigan xaadirka ah, korontada IP67 ee aan biyaha lahayn, oo daboolaysa 12W ilaa 800W, oo leh shahaadooyin badbaado oo dhammaystiran, waxaa si ballaaran loogu adeegsan karaa nalalka kala duwan ee gudaha & dibaddaba.
Beddelka korontada, oo daboolaya 12W illaa 2000W oo leh guddiyada wareegga wanaagsan iyo waxqabad weyn, ayaa lagu dabaqi karaa aaladaha caqliga leh, wax soo saarka, mashiinnada, warshadaha, nalalka, iwm. Korontada DC, waxay ka kooban tahay 1500W ilaa 60000W. Waxaan taageernaa awood sare oo la habeeyay iyo tilmaamo kale oo gaar ah oo leh waxqabad ka sarreeya, hawlgal fudud, qiimo macquul ah, aad u tartamaya.
Kaydiyaha degdegga ah ee Macaamilka PD, moodooyinka qaarkood waxay adeegsadeen tikniyoolajiyadda gallium nitride (GaN), waxay ogaadeen "cabbir yar, awood weyn", waxay la kulmeen baahida maalinlaha ah ee macaamiisha safarka ganacsiga oo la qaadi karo.
Xoogga saar R&D iyo wax -soo -saarka warshadaha korontada muddo 15 sano ah
Intaa waxaa sii dheer, awoodda Huyssen waxay sidoo kale bixisaa adeegga naqshadeynta si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha. Haddii aadan ka heli karin moodel ku habboon buug-yaraheena, kooxdayada R&D ee waayo-aragnimada leh waxay naqshadayn karaan koronto si gaar ah loo sameeyay si loo daboolo baahiyahaaga. In ka badan 22 sano oo waayo-aragnimo naqshadeynta R&D ah ee warshadaha korantada, waxaan ku siinnaa xalka guud waxaanan jeclaan lahayn inaan noqonno lamaanahaaga awoodda fog.
Awooda Korantada Dc, Awoodda Awoodda Isbeddesha, Led Strip Light Power Supply, Awoodda Awoodda La -habeeyay, Led Strip Light transformer, beddelidda korontada hab hab,